July Dream: Fish head
Posted by JulyDream at 11:50 AM
အင်း ဟုတ်ပ ငါးတွေ နေရာမှာ လူတွေ အစားထိုးပြီး ကြည့်သွားတယ် တော်တော် စိတ်ညစ်သွားတယ် မသေဘဲနဲ့ ခေါင်းပုံဖြတ်ခံနေရတာက ပိုဆိုးသလား လို့ တွေးမိတယ်
စိတ်ငြစ်လို့ဘလော့ကိုဖတ်တယ်။ တစ်နေ့လုံးလဲ အလုပ်လုပ်ပြီးပြီ။ ဘလော့ဖတ်တဲ့အချိန်မှာပျော်ရွင်ချင်တယ်။
မကျေနပ်လဲလာမဖတ်နဲ့ပြောလဲ ဖတ်မှာဘဲ ။ဘဝကို အကောင်းမြင်စမ်းပါ။ စိတ်ဆင်းရဲစရာရှူဒေါင့်က ကြည့်ရင်တော့လည်းစိတ်ဆင်းရဲစရာတွေ ချည်းဘဲပေါ့။ လောကမှာ နေရတဲ့ခဏတာ မှာ စိတ်ချမ်းသာအောင်ကြိုးစားပြီးနေပါရစေ. ကမ်းစပ်မှာ ခရုတွေကောက်ြ့ပီး ဆက်ပြီးလွတ်ပြစ်ချင်နေသေးတယ်ဆိုလဲ ဆက်လုပ်။ ဘာမှ ထူးခြားပြောင်းလဲလာမှာတော့မဟုတ်ဘူး.
ခေါင်းပုံဖြတ်တာ သွေးစုတ်တာတွေ ဟာအ ခုမှ ရှိတာမဟုတ်ဘူး. ဟိုတုံးကတည်းကရှိလာတာ။ ကိုယ်တွေ ရောသူများအပေါ်မတရားလုပ်မိတာ သေချာရဲ့လား. ခေါင်းပုံဖြတ်တာ လဲရှိတာဘဲ။ မကျေနပ်ရင် မလုပ်နဲ့ဘို့ဘဲ။ မလုပ်လို့လဲမရဘူး။ ဘာလုပ်ချင်သေးလဲ ဘာမှလဲ လုပ်လို့မရဘူး။ ဘာမှ တော့မပြောချင်ဘူး။ စိတ်ဓါတ်တွေ သိတ်ပြင်းထန်နေတယ်လို့မြင်တယ်။ စိတ်ကိုလျော့ပါ။ နမ်းတစ်လုံးနဲ့ဆီကြိတ်ချင်လဲဆက်ကြိတ်ပါ။ မင်းဘက် က မင်းဆက်ကြိတ်သလိုလဲ ကိုယ့်ဘက်ကလဲ မကျေနပ်ရင်တော့လဲ မကျေနပ်ကြောင်းပြောရလိမ့်မယ်။ တစ်တစ်ခွ ခွကြီးဆက်လက်တင်ပြချင်လဲတင်ပြပါ။
ဒါပေမဲ့တင်ပြပုံက........ဘာပြောရမလဲတောင်မသိဘူး. ကိုယ်လဲပြောချင်တာက လည်ထွက်နေပြီ။ဝေဖန်မဲ့သူတောင်မဝေဖန်တတ်တော့ဘူး. ဒါပေမဲက အနုပညာဆိုတာ .. အလုပ်ဆိုတာ…တစ်တစ်ခွ ခွ တင်ပြတိုင်းလဲ အောင်မြင်တာ မဟုတ်ဘူး။ ဆဲဆိုနေတိုင်းလဲ အောင်မြင်တာ မဟုတ်ဘူး။ အောင်မြင်ချင်လို့ ဆဲဆိုနေတာ မဟုတ်ဘူးလို့လဲ မပြောချင်ပါဘူး ဟင်း။ အီးပေါက်တာ သိတ်ကျယ်တယ်။ ဘူကနဲ့ မြည်ရုံဘဲရှိမယ်။ ရွီးကနေ လေထွက်သွားတာပေါ့ အဲသလိုမျိုးဘဲ။ ဘာဖြစ်သွားသလဲ သိချင်သလား. လေတွေ ထွက်သွားတာပေါ့ ဘာဖြစ်သွားလဲ .ဟင်..ဘာမှ မဖြစ်သွားပါဘူး။
ကျောင်းတုန်းက ဘယ်သူဆွဲထားမှန်း မသိတဲ့ ခေါင်းပုံတွေကို ဆရာမလာခင် ကျောက်သင်ပုန်းပေါ်ကနေ ဘောဖျက်နဲ့ ဖျက်ပေးတဲ့သူငယ်ချင်းကို ဒီကောင် ခေါင်းပုံဖြတ်(ဖျက်)တဲ့ကောင် လို့ နောက်ခဲ့ဖူးတယ်။
ငါးခေါင်းဆို ချက်ပြီးသွားမှသာ တို့ရဲတာ
ဘါဘါ တံဆိပ်..ကုလား ငါးပေါင်ဒါ မှုန့် လေး နဲ့ နှယ်ပြီး..ခရမ်းချဉ်သီးလေး နဲ့ ချက်စားလိုက်ရ ရင်လို့သာ..လို့.. ခံစားလိုက်မိပါတယ်။း)
( မမကွန်..ဒီမှာ တခါတည်း မေးလိုက်ပီ.. အချစ်ဟောင်း က..၀ နေပြီ လား..။ ကြည့်ရတာ ငြိမ်နေပုံ ထောက်တော့... ပိန်ပိန် လေး ချောနေတုန်း ဖြစ်၇မယ်..) ကွိ
ပိုစ့်ထက်ကို မမ ခင်ဦးမေ ကော်မန့်က ရှည်နေလို့ သဘောကျမိသေးတယ်...း)
ခေါင်းပုံဖြတ်ခြင်းက ကမ္ဘာဦးခေတ်ကတည်းက ရှိခဲ့တယ်လို့ ဆိုတယ်.. ပပျောက်သွားဖို့တော့ မလွယ်လှဘူး...
ခေါင်းပုံဖြတ်တယ်ဆိုတာ မှတ်ထားကြနော်။ ခေါင်းတွေကို ပုံပြီး တစ်ခါထဲ ဖြတ်ချပစ်လိုက်တာ။ ဟာ ဟ။ ဘာမှတော့ ဆိုင်လောက်ဘူး။းဝ)